Ndiani Chaizvo Chinangwa Chako Vateereri? | Martech Zone
Ndiani Chaizvo Chinangwa Chako Vateereri?
Chipiri, June 14, 2011 Chitatu, October 16, 2013 Douglas Karr
Kumwe kwekusanzwisisana kwakakosha nezve online midhiya ndiko kuratidza kuti vateereri vako ndiani. Vanhu vakawandisa vanotarisa mukati kana kwavo tarisiro varipo. Vhiki rino, takashanda pamwe nekambani imwe yakachema-chema kuti tarisiro yake yeC-level yaive isiri online.
Ini handisi kuzoita nharo kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Asi nhepfenyuro yepamhepo inoumbwa nevanhu vazhinji vakasiyana vanogona kukanganisa tarisiro yeC-chikamu uye kumuisa pamberi pavo. Zviitiko zvemagariro zvinopa mikana. Networking kuburikidza nemasaiti senge LinkedIn kukuswededza padhuze. Zvinyorwa zveBlog, kutaurwa munharaunda uye vateveri vanokubatsira iwe kuramba uchikomberedza tarisiro uye kuita kuti kambani yako ioneke.
Semuenzaniso, kana kambani yako iri kutsvaga vatangi vemabhizimusi uye vanamuzvinabhizimusi, saka mafemu epamusoro tech, IP uye magweta ekutanga, uye maakaunzi ekutanga maakaundari vanhu vakanaka kuti vatore pamberi. Ivo vane hukama uye vanopa iyo sefa uye chengetedzo kune avo vanotarisira. Vafadze uye iwe uchasvika pamberi pemunhu waunoda.
Sezvo iwe uchishanda yako yemagariro zano, usasungirire pane ivo vashanyi kana kuti kwavanobva, tarisa pane iwo vashanyi vari kutaura nezvako uye kukuunza iwe kune iyo tarisiro! Hukama neavo vanokanganisa uye vanosefa filamenti inokosha iyo yausingafanire kuregeredza.
Yemagariro Midhiya Usage neUS Dunhu